You are here: Home Uncategorised နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
၁-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၃း၀၀PM အချိန်ခန့်တွင် MRCCI ဧည့်ခန်းမ၌ Japan-Myanmar Economy & Investment Center (JMEIC) President Mr. Noriyuki Yonemura ပါ(၃)ဦးအား MRCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်း၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ဆန်းဝင်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမောင်မောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးစိုးသိန်း၊ စာရင်းစစ်ဒေါ်ခင်လေးမြင့်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါ်ခြူခြူး တို့မှ လက်ခံတွေ့ဆုံကာ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နိုဝင်္ဘာလ(၇)ရက်နေ့တွင် MRCCI Hall ခန်းမ ၌ ဂျပန်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ(၂၁)ခုမှ Business Matching ပွဲပြုလုပ်ရန်အတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၄င်းကုမ္ပဏီများအနက် Constrution, Manufacture,Food လုပ်ငန်းများ အဓိကထား ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Opening Kaizen & 5s intermediate Course
Written on 06/07/2018, 16:40
Written on 30/01/2018, 11:33
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၉)ရက်နေ့ညနေ (၄)နာရီအချိန်တွင် MRCCI သင်တန်းခန်းမတွင်...
Written on 09/01/2018, 13:21
Member list for 2017-2020 Election
Written on 09/01/2018, 12:08
Written on 24/11/2017, 12:06
၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်၊ MRCCI ဧည့်ခန်းမ၌ တရုတ်နိုင်ငံ Ministry of Commerce The...
Opening marketing management training class
အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေသင်တန်း (၂/၂၀၁၈) တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Franchising ဆိုင်ရာအသိပညာနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်နိုင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Yunnan ပြည်နယ် Shuanghiang ခရိုင် ၊ Lincang မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
(5-6-2018)ရက် (3း00)နာရီအချိန် ဟောင်ကောင်မှ Gramd Power co,ldt နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
moi SME Seminar (5s Seminar) ပွဲကျင်းပခြင်း
အစ္စရေးနိုင်ငံမှ ပညာသင်ဆုအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
(4-6-2018)ရက်နေ့(1း00)အချိန် ILO သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
(4-6-2018) ရက်နေ့(1:00)pm အချိန် MRCCI အသင်းရုံးတွင်ကျင်းပသော ILO အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား ဆိုင်ရာ... Read More...
Australian Trade Commission is organising the Australia Future Unlimited Education Exhibition to beheld on 22 September 2015 at Sedona Hotel Mandalay. There will be 18 Australian institutions participating in the exhibition... Read More...
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့်... Read More...
၂၀၁၅ ခု မေလ ၃ ရက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအတွက် အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့်... Read More...